Tababaraha Portugal Oo Beeniyay Inuu Jiro Qilaaf U Dhaxeeya Isaga Iyo Cristiano Ronaldo. - jornalizem
Tababaraha Portugal Oo Beeniyay Inuu Jiro Qilaaf U Dhaxeeya Isaga Iyo Cristiano Ronaldo.
Tababaraha Portugal Paulo Bento ayaa sheegay inuusan jirin isku dhac isaga iyo kabtan Cristiano Ronaldo ah.
Ronaldo ayaa si degdeg ah uga baxay garoonka ka dib kulankii guuldarada ay ka soo gaartay Germany, isagoo aan salaamin tababarihiisa ama aan u sacabatumi taageerayaashii reer Portugal ee uu u soo safray koobkaan.
Lakiin Bento ayaa beeniyay wararka sheegaya in xiddiga Real Madrid uu shalay seegay tababarka ka dib markii tababaraha uu dhaleeceyn kala kulmay halyeeyada reer Portugal Luis Figo iyo Rui Costa.
Labada Halyeey ayaa ku eedeeyay tababare Bento inuu ku soo shirtagay qaab ciyareed difaac ku dhisan, taasoo la sheegay inay xitaa ka careysiisay Ronaldo. Lakii Bento ayaa yiri: “Qof walba isku isku mid ah ugama jawaabo niyad jabka iyo xaaladaha sidaan oo kale ah”.
“Feker ahaanteyda waan fahmi karaa sida uu Ronaldo u jawaab celiyay”
“Lakiin hadii uu jiro qof ka xumaaday ciyaartii sabtida, waa dadka reer Portugal, raaligelin ayaana ka bixinayaa”.
“Waxaan idiin xaqiijin karaa in 23 ciyaaryahan ay manta ka qeyb qaadatay tababarka, intii aan halkaan joognayna hal mar xitaa Ronaldo ma uusan seegin tababar”.
“Waxa uu u ciyaaray si wanaagsan sabtidii, waxaana uu u ciyaari doonaa sidaas oo kale kulanka Denmark”.
Portugal ayaa caawa wajaheysa Denmar, iyadoo hadii guuldarro ay ka soo gaarto ay xaqiijisan doonaan inaysan u gudbi doonin wareega 8da ee Euro 2012, lakiin guul ay gaaraan waxa ay rajo u yeeli doontaa inay u talaabaan wareega 8da.